Shikhar Samachar | सरकारको कर्तव्य र उतरदायित्व सरकारको कर्तव्य र उतरदायित्व
सरकारको कर्तव्य र उतरदायित्व
प्रकाशित मिती: २०७७ जेष्ठ ८
विश्वमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मान्छेहरु मर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । दिनप्रतिदिन भाइरस बाट मर्नेको संख्या बढ्दै जादा सम्पुर्ण विश्व नै चकित परेको छ । सम्पुर्ण विश्व नै पुर्णरुपले ठप्प भएको सम्भवत मानव जातिको इतिहासमा पहिलो पटक हो । यश बाट विश्वलाइ भएको क्षतीको आर्थिक मुल्यांक असम्भव छ । अहिले नेपालमा पनि दिनप्रतिदिन संक्रमीत र मर्नेको संख्या बढिरहेको छ । विश्वनै लकडाउनमा ( बन्दाबन्दी ) भएका बेला नेपालले पनि अझै जेठ २० गते सम्मको लागि लकडाउन थपिएको छ । एउटा भनाइ छ दु:ख को बेला आफ्नाहरु पनि पराइ हुन्छन भन्छन साचिकै रहेछ । त्यस्तै नेपालको र बिदेशमा बस्दै आएका नेपालीहरुको अबस्था पनि केही हद सम्म यस्तै छ । अहिले नेपाल कोरोना महामारी र सिमा विवादको समस्या बाट गुज्रिरहेको छ । वर्ष पिच्छे भारतले गरेको सिमा विवादमा अहिले पनि नेपाल त्यही विवादलाइ लिएर नेपाल सरकार आलोचनाको सरकार बन्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि कोरोना महामारी पछि स्वदेश तथा बिदेशमा बस्दै आएका नेपाली दाजुभाइहरुले विभिन्न समस्या खेप्दै आइरहेका छन । नेपालले पनि देशको आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै पुन: त्यही स्थिति सुचारु गर्नको लागि सरकारले विभिन्न योजना तथा रणनीति अपनाइरहेको छ । नेपाल बाट वैदेशिक रोजगारीको लागी देश छोडेर बाहिर गएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरिरहेको छ ? के कस्ता रणनीति अपनाउनु पर्ला ? अनि कसरी स्वदेश लाउन सकियला ? आदि प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनुछ ।
नेपाल सरकारले आफ्नो कुर्ची बचाउनको लागि चिन्ता लिएर भएन देशका जनताहरुको पनि चिन्ता लिनुपर्दछ । बर्सेनि लाखौ देशवासी बाहिरिएको खबर हामिले समाचार वा रेडियोमा सुन्दै आइरहेका छौ । यसरी आफ्नै दाजुभाइ विदेशिदा नया युवाहरूलाई पनि डर लाग्छ भोलि गएर हामिहरुले पनि जेजती पढे पनि आखिरमा गन्तव्य बिदेशको हो । म पनि अहिले घरभन्दा बाहिर पढ्नको लागि काठमाडौ बस्दै आएको छु । मत आफ्नै देशको भुमी भित्र हुदा पनि मलाइ भोलि के खाने, कस्तो खाने र अनि खाना सकिए पछि कहाँबाट भन्ने चिन्ता हुन्छ । सोच्नुहोसकी देश छोडेर बाहिर गएका नेपालिहरुलाइ अर्काको देशमा जब खल्तिमा पैसा अनि नौकरी हुदैन त्यसपछि कस्तोहोला ।
सरकारले भारत बाहेक अन्य देशहरुमा बस्ने नेपालीलाइ प्लेन चार्टर्ड गरेर देश भित्र्याउन सकिन्छ भने भारतमा भएका नेपालिलाई किन ल्याउन सकिन्न ? भारतमा बस्दै आएका नेपाली भाइ हिक्मत चन्द भन्छन यहाँ खान लाउनलाइ समस्या छ । यहाको सरकारले अहिले सम्म केहि राहत पनि दिएको छैन । राहत पनि जो सग भारतिय रासन कार्ड र आधार कार्ड भएको लाई मात्र मोल्दो रहेछ । अहिले सम्मत आफ्नै पैसाले खाइरहेका छौ अब खानेकुरा सकेपछी के गर्ने हो भन्ने थाहा छैन । काम गर्ने ठाउँ बाट पनि काम गरेको पैसा दिदैनन अनि काम गर्ने कम्पनी र होटेल सबै बन्द छन अब हामिले के गर्ने भन्नेनी थाहा छैन कति पय नेपालिहरु खान नपाएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन ।
यहि कुरालाइ मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले भारतमा बस्दै आएका नेपाली हरुलाइ घर फर्काउन सक्दछ । बिदेशमा बस्दै आएका नेपाली दाजुभाइहरुको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यदि यो परिस्थितिको बारेमा सरकारले संवेदनशिल हुन सकेन भने देश भित्रका युवा अथवा जनताहरुले नया कदम बाध्य हुनेछन । सिमामा पुगेकालाइ देश आउन नदिने सरकारले समुन्द्र पारिका नागरिकको उद्धार गर्ला भनी कसरी पत्याउने । भारतमा बस्ने दाजुभाइहरु आफ्नै खर्चमा सिमामा आएर पिडादायी जीवन बिताइरहेका नेपालिलाइ आफ्नो देश आउन नदिएर सरकारले अन्याय गरिरहेको बताउछन । चिनबाट त्यति धेरै ठूलो लगानी गरेर नेपाली जनतालाइ ल्याउने सरकार किन आज भारतबाट आफ्नै खर्चमा घर फर्केका नेपाली दाजुभाइहरु जो परिवार र बालबच्चाहरुका साथ सिमानामा आइपुगेका र अत्यन्त पीडा र अपमानित छन । भारतमा नेपालको जनसंख्याको ५-७ मिलियन नेपाली बस्दै आउनुभएको छ । भारत सरकारले उनिहरुलाइ उनिहरु बसेको ठाउबाट उठायर बोर्डरमा छोडिरहेको छ । किन त्यता नेपाल सरकारको ध्यान गइरहेको छैन ? कोरोना भाइरस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारिको प्रमुख गन्तव्य मानियका मलेसिया, कतार, कुवेत, साउदी अरब, बहराइन, ओमन र दुबै मुलुक बाट ४ लाख भन्दा बढी नागरिकलाई नेपाल सरकारले स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । मलेसियामबाट ३७०००, कतार १४५०००, साउदी अरब १२००००, दुबै ६७०००, कुबेत २४०००, बहराइन १०५००० र ओमन बाट ३५०० नागरिकलाई नेपाल फर्काउने कार्ययोजना बनाइ रहेको छ ।
अनि यी सात देशबाट नेपाली फर्काउन प्लेन चार्टर्ड गरेर देश फर्काउन सकिन्छ भने पछि भारतमा बस्दै आएका नेपालिहरुको लागि प्लेन चार्टर्ड र सरकारले खर्च पनि गर्नु पर्दैन । सरकारले कसैलाइ काखा र कसैलाइ पाखा किन गरिरहेको छ ? यस्तै पनि नेपाल भारत सिमा विवादको कारणले गदा त्यहा बस्ने नेपालिहरुले कती दु:ख खेपी राख्नु भएको होला । अनि किन सरकारले आफ्नो नागरिकलाई देश फर्काउन आनाकानी गरिरहेको छ ? बिदेशमा बस्दै आएका सम्पुर्ण नेपाली नागरिकलाइ स्वदेश फर्कायर स्वदेशी रोजगार मुलक तालिम दिएर स्वदेशी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यति बेला सरकारले यहि कुरालाइ मनन गरेपछी हाम्रो देश केही वर्ष पछि विश्वको विकसित रास्ट्रहरुको सुचिमा हुन्छ । बिदेशमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकले बिदेशमा सिकेको सिपलाइ आफ्नै देशमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।